celebrity – DigitalTimes.com.mm
1315 shares5147 views
ဖုန်းသုံးရင် Brand တစ်မျိုးတည်းပဲ စွဲသုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ဝိုင်းလေး
Pyone Thizar Ye - Mar 14, 2017
အိမ်မက်ဆုံရာကနေ အနုပညာလောကထဲကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Selfie ဆိုတဲ့သူမရဲ့တစ်ကိုယ်တော်ခွေကို လည်း ပရိတ်သက်ရှေ့ ချပြခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ဝိုင်းလေးဟာ အခုဒုတိယအခွေအတွက်လည်း ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ သူမနဲ့ တွေ့တုန်းဆုံခိုက်မှာ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့သမျှကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Q.လတ်တလော ညီမလေးရဲ့အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုကိုပြောပြပေးပါလား။ ရှိုးတွေဆိုဖြစ်နေတယ်။နယ်သွားဖို့တွေရှိတယ်။ဒီလ(၂၅)ရက်နေ့မှာ သိန်းငှက်ဂီတညဆိုတဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကမျော်စင်ကျွန်းမှာ ည(၇)နာရီစပါမယ်။အဲဒီအတွက် ဝိုင်းလေးတို့ သီချင်း…
108 shares383 views
Pyone Thizar Ye - Dec 11, 2016
၂၀၁၇ မှာ မင်္ဂလာဆောင်မှာဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်ကို ဒါရိုက်တာ ဝိုင်း ရဲ့ “ဘယ်ညာဘယ်ညာ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကွင်းမှာတွေဆုံပြီး သူရဲ့လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ အတူ လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ဖုန်းအကြောင်းကိုမေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Q လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေး ကိုပြောပြပေးပါလား။ အခုရိုက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားနာမည်က “ဘယ်ညာဘယ်ညာ” ဒါရိုက်တာ…
Oppo F1s နဲ့ Samsung S6 သုံးတယ်ဆိုတဲ့ Angel Lamung နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
Pyone Thizar Ye - Dec 10, 2016
Miss တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာပြီး အခုအချိန်မှာ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ်ပါ ရပ်တည်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ Angel Lamung နဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Q အိန်ဂျယ်ရဲ့ လက်တလော အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု …. 2017 အတွက်ပြက္ဒိန်တွေ ရိုက်ဖြစ်တယ်။ ဘေဘုတ်တွေ ရိုက်ဖြစ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားလည်း ရိုက်ထားတယ်။…
CELEBRITY, Interview, Local
Pyone Thizar Ye - Dec 03, 2016
Sony ရဲ့ Brand Ambassador တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် Bunny Phyo နဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပြီး လတ်တလော ထွက်ရှိထားတဲ့ Lucky စီးရီးအကြောင်းနဲ့အတူ သူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နည်းပညာပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Q Bunny ရဲ့ lucky တေးစီးရေးခွေလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါလား။ lucky…
Earphone crazy လိုပြောတဲ့ ရွှေမြင့်မိုရ် နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း(Photo Gallary)
Pyone Thizar Ye - Nov 27, 2016
ရွှေမြင့်မိုရ် နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Q လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားလေးတွေကို ပြောပြပေးပါလား။ Photo model ပဲ လောလောဆယ် လုပ်ဖြစ်နေတယ်။ကြော်ငြာတွေရိုက်ထားတယ်။ ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးတွေ ရိုက်ဖြစ်တယ်။ Mtv တွေရိုက်ထားတယ်။ မြဝတီ channel နဲ့ လဲတော်တော် များများ ရိုက်ထားတယ်။ နယ်ကားတွေလဲ ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ နောက်လထဲမှာ…
Oppo brand တွေ အသုံးများတဲ့ အေးချမ်းမိုးနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
Pyone Thizar Ye - Nov 25, 2016
ဆေးကျောင်းတစ်ဖက်တက်နေရင်းနဲ့ အနုပညာလောကထဲမှာ အောင်မြင်လာတဲ့ အေးချမ်းမိုးနဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ IT ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Q လက်တလော အေးချမ်းမိုးရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု ……… ပိုးထည်ကြော်ငြာလေးတွေ ရိုက်ဖြစ်တယ်။ပွဲတွေမှာ Presenter လုပ်ဖြစ်တာ များတယ်။ဆေးကျောင်းကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေသိပ် မလုပ်ဖြစ်ဘူး။…
Samsung fan လို့ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
Pyone Thizar Ye - Nov 19, 2016
Digital Times ရဲ့ ကဏ္ဍအသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံးခြင်း ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ shooting ရိုက်ကွင်းကိုသွားရောက်ကာ လက်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ သူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နည်းပညာ ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Q. လက်တလောအနုပညာ လှုပ်ရှားမှုလေးကို ပြောပြပေးပါလား။ မနေ့ကဖြစ်သည် ဆိုတဲ့…